အဘနဲ့ အဘရွာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖိုးဇီးရိုး - ပွင့်လိုက်ပါ ပန်းပိတောက်ရယ်
ကျော်ဟုန်း - ရေ = ရေ
မောင်စိုးချိန် - ကျောကုန်း ခြေထောက် ပန်းပွင့်များ
စောဝေ - ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်ပေး
ရန်လင်းအောင် - ရယ်တရွေ့ မောတရွေ့
အောင်လွန်းမြိုင် - " ရှာ ဖွေ ခြင်း "
အောင်သူ (မြင်းခြံ) - ဘီလူးနိုင်ကဗျာဆရာ
ေ မွးေ န့
မိုးခါး ● အရူးက ပါးပါးလေးကို အထူကြီးလုပ်ပစ်တယ်
အညှက်ဖြူဆုပ်၊ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တဲ့ . . .
မွေးစုတ်တဘက်၊ ချည်စောင်ကွက်တဲ့ . . .
အုန်းသီးတလုံး၊ ဘ မသုံးဖူး
ရွာက ကလေး၊ အဘမြေးတွေ
အေး … အေး … ပြောရသေးတာပ။
ရွာက ကလေး၊ အဘမြေးပေါ့။
နောင်ဘ၀လဲ၊ ဘ မခွဲဖူး
(၁၁-၅-၇၃ ကရေးလက်စကို ၁၂-၁၂-၇၆ တွင် အပြီးသတ်သည်။)